छोरीलाई जस्तै छोरालाई पनि संस्कार सिकाउने कि ? - सबैको समाचार
छोरीलाई जस्तै छोरालाई पनि संस्कार सिकाउने कि ?
नेपाली समाजमा महिलालाई घर तथा समाजको इज्जतको रूपमा हेरिन्छ । छोरी जन्मने बित्तिकै उनलाई नियम र कर्तव्यका डोरीले बाध्छौ अनि जन्मने वित्तिकै कर्तव्यका पङ्ती बनाउन हतार हुन्छ नि है? छोरीलाई सानैबाट लजाउन सिकाउने समाजले कहाँ लजाउनु हुन्छ र कहाँ हुदैन भनेर छोरालाई सिकाउन किन आनाकानी गर्छ ? छोरीलाई सिकाइन्छ छोरा मान्छेसंग मुखमुखै लाग्नु हुदैन, उनीहरुको कुरा सुनीसकेपछि मात्रै आफ्नो कुरा राख्नु पर्छ ।
लेखक : रमिला खड्का
तर छोराले मनपरी गरोस्,हिडोस्,बोलोस् जे गरोस् वाह् हुने अनि तिनै कार्य छोरीले गरिन् भने तपाईंको नाककै जान्छ नि हैन ? सानैदेखि छोरीलाई सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर संस्कार सिकाउने समाज र परिवारले छोरालाई भने न त कुनै संस्कार सिकाउछ न त छोरीलाई जस्तो निगरानी नै हुन्छ । हो तपाईंको यस्तै सोचले गर्दा आज दैनिक जसो बालिका र किशोरीहरू अझ भनौँ तपाईहरुकै छोरी बलात्कृत भइरहेकी छन् । तपाईंले सोच्नुहोला यस्तो पनि हुन्छ र ? हो हुन्छ तपाईको सहरमा छैन होला । गाउँमा गएर अध्ययन गर्नुस् अनि विस्तृत जानकारी प्राप्त पाउनुहुने छ ।
‘संस्कार’ यो शब्द सुन्दा हामी त्यती वास्ता गर्दैनौँ । संस्कार भनेको भनेको अनुशासित जीवनपद्धतीमा डोहो¥याउने एउटा माध्यम हो । संस्कारले हामीलाई सही मार्गदर्शन गर्छ । तर एकाध बाहेक सबैले छोरीलाई मात्रै संस्कार सिकाउने गर्दछन् जुन पछिल्लो समय छोरालाई पनि सिकाउन आवश्यक छ ।
हामीले छोरालाई यसरी हुर्काइरहेका हुन्छौ कि मानौ उनीहरु नै भोलीका सर्वेसर्वा हुन् । यसले नै छोराहरुमा दम्भको विजारोपण हुन्छ र अंहकारले फुल्दै जान्छन् अनि बलात्कार बनेर समाजमा छरिन्छन् ।
नेपाली समाजले पुरुषलाई सधैँ बलियो पात्रको रूपमा हेर्ने गर्छ । पुरुषले आफूमा पुरुषत्वको घमण्ड र पुरुषत्वको गलत प्रयोग गर्न अग्रसर हुन्छ । पुरुष प्रधान समाजमा महिलाहरू पुरुषबाट पीडित हुनुपर्ने अवस्था आफ्नो छोरामा यस्तो दम्भ, अहंकार पैदा नहोस्, त्यसका लागि अहिले नै तपाईंले उनलाई उचित संस्कार दिनु जरुरी छ ।
नेपालको कानुन अनुसार कसैको मन्जुरी बिना करकाव, डर, धम्की वा बल प्रयोग गरी जबरजस्ती गरिने यौन क्रियालाई बलात्कार भनिन्छ । त्यसै गरी उमेर नपुगेका बालिकालाइ ललाइ फकाइ, मन्जुरी लिइ वा नलिइ गरिने यौनकार्यलाइ पनि बलात्कारको रूपमा लिइन्छ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले दिनहुँ भइरहेका बलात्कारका घटनाका विरुद्ध सडकमा सयौँ मानिस उर्लिएका छन् । उनै पीडितको न्यायका लागि । नेपालको कानुनमा त छैन तर पनि माग गरिरहेका छन् बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय । अब तपाईँ नै भन्नोस् तपाईका छोरालाई पनि छोरीलाई जस्तै संस्कार सिकाउने कि फाँसी चढाउने ? संस्कार मात्रै दिएर पनि नहोला । जसरी एक आमाले आफ्नी छोरी घर फर्कने समयदेखि लिएर छोरीले गर्ने क्रियाकलापमा ध्यान दिन्छिन् त्यसैगरी बाबुले पनि छोरा कहाँ जान्छ, के गर्छ, साथीभाईसँगको सङ्गत कस्तो छ? केटी मान्छेप्रति कस्तो धारणा राख्छ त्यो सबै कुराको ख्याल गर्नु जरुरी छ ।
अनि केटी साथीहरूलाई जिस्काउनु हुँदैन, केटी साथीसँग पनि आदरका साथ बोल्नुपर्छ,केटी साथीलाई हिंसा गर्नु हुँदैन है भनेर बारम्बार सम्भा गर्नुपर्छ । बलात्कार गर्ने प्राय गरी पुरुष नै हुने हुँदा छोरालाई पनि हामीले यस सम्बन्धि शिक्षा दिइरहनु आवश्यक छ ।
हाम्रो पहिलो पाठशाला घर हो । घरमा नै हामीले छोराछोरीलाई उनीहरुकोे शारीरिक वृद्धि र विकासका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ । विशेषगरि ११ देखि १८ वर्ष सम्मका छोराछोरीसङ्ग बाबुआमाले यौनका विषयमा, शरीरको बृद्धि र विकासको विषयमा निरन्तर कुराकानी गर्नु पर्छ । आमाले छोरीलाई र बुबाले छोरालाई शरीरको वृद्धि र विकास कसरी कसरी हुन्छ, कस्ता प्रकारका परिवर्तनहरु देखापर्छन् ? जस्ता विषयमा सचेत गराउनुपर्दछ ।
यी यी कुराहरु गर्नुहुँदैन, यस्तो कुरा ग¥र्यो भने कानुन लाग्छ जस्ता विषयमा जानकारी गराउने गर्नुपर्दछ । मानिसले प्राप्त गर्ने ज्ञानको पहिलो स्रोत परिवार हो भने विद्यालय र समाज पनि ज्ञानका स्रोत हुन । बालबालिकालाई समाजले दिने शिक्षा, परिवारबाट पाउने शिक्षा र विद्यालयका पाठ्यक्रमबाट पाउने शिक्षाले बालबालिकाले कुन बाटो अँगाल्छन् भन्ने तय गर्छ ।
अझै पनि विद्यालय र परिवारमा यौनसम्बन्धी कुराको बारेमा खुलेर कुरा गर्ने संस्कारको विकास नहुनु, विद्यालयमा शिक्षक खुलेर पढाउन लजाउने र यौनका कुरा गर्दा नराम्रो दृष्टिले हेर्ने जस्ता मनोवृत्तिले गर्दा यौन शिक्षा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बलात्कारका घटना दिन प्रतिदिन बढ्नुमा सामाजिक चेतना, सामाजिक मान्यता,आर्थिक अवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, आपराधिक मानस्थिति, पुरुष प्रधान समाज,सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, मोबाइल तथा इन्टरनेटको दुरुपयोग प्रमुख कारणहरू हुन् ।
कुनै महिलामाथी बलात्कार हुनुका थुप्रै कारणहरु हुन सक्दछन् तर ति मध्ये मुख्य कारण चाहीँ महिलाको शरिरलाई वस्तुको रूपमा हेर्ने पितृसत्तात्मक सोच हो । महिलाको शरिरलाइ खेलौना तथा मनोरञ्जनको साधनको रूपमा हेर्ने पुरुषको नालायकी सोचको कारणले नै महिलामाथी बलात्कारका घटनाहरु हुने गरेका छन् ।
समाज र देशको हरेक मुख्य निर्णायक भूमिकामा पुरुष हाबी हुनु आपराधका घटनाहरू वृद्धि हुनुको अर्को कारण हो । त्यसैले महिलाहरू बलात्कार पश्चात् किटानी जाहेरी गर्न असहज महसुस गर्छन । कतिपय अवस्थामा प्रहरीहरूले पीडितको बयान विश्वास नगर्ने र उजुरी नै नलिने गरेको समेत हुनेगर्छ । जब प्रहरी प्रशासनको उच्च ओहोदामा बस्ने व्यक्तिले बलात्कारबाट पीडित व्यक्तिको पीडा र मनोभावना बुझ्न सक्दैन, त्यही व्यक्तिले न्याय दिने सम्भावना न्यून हुन्छ ।
नेपाली समाजमा बलात्कारको कारणहरू सर्वविदितै छन् । समाजमा एक अबोध बालिकामाथि बलात्कार हुनु लज्जाको विषय हो । योभन्दा लज्जास्पद पीडकलाई कानुनको दायरामा नल्याउनु हो । के अब हामी सधैँ एक बालिका,महिला बलात्कृत भएको घटना सुन्दै बस्ने हो ? अनि पीडितले न्याय नपाएको हेर्दै बस्नुपर्ने हो ?
यस्ता घटना समाधानका लागि चुस्त दुरुस्त कार्यसम्पादनको, र दृढ ईच्छा शक्तिको कमि छ । विद्यालय तहदेखि नै यौन शिक्षामा सुधार गर्नु महत्वपूर्ण छ । पीडकलाई कडा कानुनको व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन, निष्पक्ष छानविन तथा सुरक्षित महिलामैत्री उजुरी प्रक्रिया बनाउन सकेमा पनि बलात्कार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
अन्ततः चुप लागेर नबसौँ । बलात्कारविरुद्धको अभियानमा साथ दिऔँ । न्यायका लागि सधैँ लागिपरौँ । पुरुषले पनि आफ्ना दिदी बहिनी,छोरी र आमालाई जस्तै अरु महिलालाई पनि सम्मान गरौँ । छोरीलाई जस्तै छोरालाई पनि संस्कार सिकाऔँ ।
मन्त्री रामकुमारी झाक्री भोली काभ्रे आउने
काभ्रेमा ९१ जना संक्रमित थपिए